Mabasa muDubai Recruitment inowanikwa muDubai uye Abu Dhabi - Mabasa anowanikwa muDubai uye Abu Dhabi! - Mabasa - Basa - Kufamba
Mabasa muDubai Recruitment inowanikwa muDubai uye Abu Dhabi - Mabasa anowanikwa muDubai uye Abu Dhabi!
Kuchoboka muDubai - United Arab Emirates
Mabasa mu Dubai Kubhadhara - Tiri kuunganidza zvino
Mabasa mu Dubai Kubhadhara kwekutsvaga. Nezvo izvi mupfungwa, timu yedu, kubatsira vashandi vatsva. Kunyanya iyo ine ruzivo rwakanaka. Semuenzaniso, kana iwe uri kutsvaga basa kune imwe nyika. Uye kuva makore akati wandei echiitiko. Boka redu rekurairidza riri kutarisira kukubatsira. Padivi rakashata, vashandi vekunze. Ndiani angave asina ruzivo rwakakwana. Zvichiri zvinogona kuwana basa somuenzaniso mune zvekuchengeteka. Asi zvinotora nguva yakawanda.
Tinokupai basa mu Dubai!
Dzvanya pamufananidzo kuti uwane CV
Career iripo muDhaibha uye Abu Dhabi!
Basa mu Dubai Recruitment - Dubai City Company, Tiri kuunganidza ku Dubai! Sezvinei nenyaya, kambani yedu ine mabasa aripo mu tubai uye Abu Dhabi. Nyorera basa idzva neako akagadziridzwa CV nhasi !. Dubai Guta uye Abu Dhabi Kazhinji kutaura inotevera gore rekukura kukuru nemabasa mazhinji emabasa. Mumamiriro ezvinhu akadaro, Emirates yakafambira mberi nemitengo yemafuta. Mazuva aya GCC dunhu iri kutanga kutanga kubata mabasa akanaka kwazvo ekutsvaga uye yakatanga mapurogiramu chaiwo kune vatorwa.
Mukupedzisira kuongororwa, timu yedu gadza basa uchitsvaga chirongwa chekusimudzira chekusimuka mikana yemikana yebasa nemabasa kwauri. Tichipiwa pfungwa idzi, tine nzira inonyoreswa yezvisikwa zvitsva nokuda kwemabasa ose ekutsvaga mu 2018.
Kusvika panguva ino, Dubai City Kambani inotora kuongororwa kwevanopfuura vashandi ve950 kuyambuka United Arab Emirates. Saka kumberi, isu takagadzira mamwe matipi e jobs in Dubai for Indian.
Mamwe makambani yakagadzira kuwedzera gore rino kuDubai, paine mashoma mashoma emafemu anoronga basa kudimburwa.
Basa rokuvaka mukati memafuta nemafuta emagetsi achiripo ichikura muSharjah Dubai, asi zvishoma nezvishoma muBud Dhabi.
Pamusoro peZ35,000 Makambani muDhawai mune kuunganidza mabasa emabasa uye mahofisi ekugadzirira.
Tinopa Jobs mu Dubai Kuchengetedza kwekutsvaga pamwe ne Dubai Dubai Company.
Basa mu Dubai Recruitment - Dubai City Company
Mabasa mu Dubai - mutungamiri wakakwana wokuwana basa
Employment mu Dubai zviri zvose pamusoro hope basa Ukuwo unogona kuchiwana.
Kunyangwe izvi zvingava zvechokwadi kana uri kutarisa kuti uwane itsva mikana yebasa muUnited Emirates. Dubai City Company ine mashoko akanaka kwauri. Kune zvakawanda mabasa akawanda akawanda muguta uye vakasiyana kubva. Nekudaro, kune chimwe chinhu, nzvimbo yekushanda uye nguva yekushanda inogona kunge iri dzakasiyana kwazvo nenyika yokumusha kwako. Kutaura basa rokutsvaga basa mu Dubai titarisa nyaya yedu yatakanyora pasi zvose zvaunoda kuziva nzira yekuwana mabasa mu Dubai.
Nhau huru kune itsva vanotsvaka basa mu Dubai uye Abu Dhabi. Chimwe chinhu chinonyanya kukosha muvhimi wese webasa ane unyanzvi hwakanaka anogona kuwana basa rakabhadharwa zvakanaka muUAE. Kutanga, vanhu vachangosvika muDubai uye yakazarurirwa mazano matsva ebasa. Iwe unofanirwa kuziva kuti nderipi basa rauri kutsvaga kupinda muUnited Arab Emirates. Pazasi pechikwata chedu anonongedzera mashoma mazano iwe kwaunowana iwo nzvimbo dzakanakisisa kuMiddle East. Aya mawebvu anoita kuti iwe uwane mafungiro matsva pane nzvimbo dzakasiyana-siyana muDaily City uye Abu Dhabi. Jobs in Dubai Kuchengetedza ndicho chinhu chako chekubudirira muMiddle East.
Isu tava kunyoresa!
Tora nekukurumidza kuona kweakanakisisa mushandisi ane ruzivo portals yebasa pamusika webasa muMiddle East. Tiri kuyedzawo kubatsira zvakanyanya mukupa Mashoko anokoshesa kumunhu wese anoedza basa. Pakawanda, basa redu nderokukuratidza kuti makambani aripi iyo yakanakisisa yekushandira muUAE.
Padivi risina kunaka, iripo nzvimbo dzakawanda dzakakurumbira dzebasa. Vamwe vacho vanova vakakurumbira mukurumbira, saka iwe unowanzozviwana uchizvipikisa mazana e vakatsvaga uye iwe uchange uine mutsara mukuru. Asi pasi pemamiriro ezvinhu iwayo, usamborega pa wako basa tsvaka pa WhatsApp nekuti imi mese muri kuenda zvimwe nzira yebasa muDubai City.
Chinangwa chedu ndechekuti ndikuratidzei kuti kupikira kudzokerazve uwane iyo yakakwirira yakabhadhara mabasa mu Dubai. Basa mu Dubai Kuwana muMiddle East.
Top Job Portal Site mu Dubai For UAE uye Jobs mu Dubai?
Iko kambani yakatendeka mubasa rangu rokutsvaga
# No.1 BASA RAKANAKA - Pamusoro: Job Site ye Career uye Recruitment Service muUAE.
Dubai City Company - Jobs in Dubai - Winner Company and Nha .1 Basa Rokupa mu UAE. Tiri kunyora nezve zvinhu zviri kuitika muAFA.
Dubai City Company nzvimbo yebasa ndiyo mutambi mukuru mubasa rekutsvaga yemu market. Kazhinji, vatariri vedu vakuru vari pano nokuda kwekubatsira vamwe vanotsvaka basa muDhailand. Pakupedzisira, iwe unogona kuwana basa rinokosha zvikuru kubva kuvaridzi semuvhimi webasa. Vakawanda vevanotsvaka basa uye anotsvaga basa vanotsvaka vauya vachibva kuIndia, Pakistan, uyewo Saudi Arabia. Kune rumwe rutivi, vachitsvaka mabasa mu Dubai nevekunze kumusika basa rekutsvaga vamiririri uye maguta nzvimbo kune nyanzvi yekuunganidza, basa uye kushanda nharaunda kuMiddle East.
Dubai City Company - Tiri webhuiti yeL Legit yeMabasa mu Dubai
Nenzira imwecheteyo, webhusaiti yedu inopa A high pay scale Jobs in Dubai. Zvakare, isu tiri kushandisa advanced technology kukubatsira iwe kurota hope basa. United Arab Emirates ndeimwe yenyika dzinosarudzika uye dzinotaridzika dzevavhimi veInternational Jobhi uye veEuropean kutsvaga basa. Guta reDhailand ndiro rakanakisisa repat kuenda uye vazhinji vavo vanoshandisa ruzivo rwezvino kuti vawane basa rinokosha mumhizha yekuvaka.
Nokuda kwechikonzero ichi, timu yedu ndeimwe yei zvakanakisisa mukuisa vatariri. Naizvozvowo kubatanidzwa mabasa pasi rose Chikwata chedu chinopa mikana yakawanda yebasa kune ese pamusoro penyika dzeGCC. Semuenzaniso, kana iwe uine dhigirii mumunda wekushambadzira iwe unogona uve mukwikwidzi akanaka kwazvo kwatiri. Nekuda kwemabasa emakambani edu, tiri kunyanya kushanda neIndia, Philippines, Saudi, Qatar, Pakistan job hunters. Saka, nekuda kwevamwe vari kutsvaga basa vari kutsvaga mabasa avo ehope mu Dubai. Tinopa huwandu hwezvakaitwa mabasa muUAE. Mabasa mu Dubai Kuwana pamwe ne Dubai City Company kunogona.
Kuti usatambisa nguva yako unofanirwa kunyatso kurodha yako Resume uye edza Yakakwana yakakodzera YOKUSHANDURA Chirongwa. Dubai City Kambani inopawo zvinoshamisa basa rekutora mumagariro ezvenhau. Uye zvakatonyanya. Tiri kuhaya kuMumbai uye Internally.
Mabasa mu Dubai - Dubai City Company
Isu tine rubatsiro rwakanakisisa rwekutsvaga basa ku Dubai City!
Dzimwe Nyaya dzepamusoro dzeC5 - Kuwana mabasa emabasa muDhailand City
Yakakodzera Simba uye Mararamiro - Dubai City Kambani
Bayt - Kutungamirira basa remasuo muUAE
Nha .2 Bayt.com
Munhu wose anotaura nezvazvo sei kuwana basa mu Dubai?. Chinhu chokutanga chokuyeuka Bayt ndechimwe chezvinyorwa zvinowanikwa basa Gulf Countries mabasa mabasa. Kutaura ino saiti yebasa inosanganisira Saudi Arabia, United Arab Emirates, Oman, Yemen, Kuwait, Qatar, uye Bahrain. Uye iwe unogona kusarudza kubva kune dzimwe nyika zvakare. Bayt inoshambadza mabasa asingaverengeki anopa kanenge mazuva ese.
Uzhinji huchapupu hwakasimba kana uri umwe wevaya vakaoma jobs search expats. Kazhinji kutaura, iwe unofanirwa kutumira kutangazve mangwanani ega ega kune vashandisi vatsva. Mukufamba kwenguva, iwe unofanirwa kuita izvo zvakare manheru ega ega uine tariro yekuona nzvimbo dzako dzekurota. Iyi portal zvakare inokarirwa zvakanyanya kumabasa muDubai yeIndia.
Vazhinji vevanotsvaga basa kuda UAE sezvo izvo zvinogona kuchinja hupenyu hwako. Nekuda kweiyi kambani yeDubai muUAE post mabasa ekuvharira mabasa matsva mukati mehusiku. Naizvozvo mabasa avo akanaka emabasa ndea UAE-based. Padivi risina kunaka nekuti rakakura saka iwe ungangodaro futi tsvaka mikana muArabia. Maodzanyemba eAfrica uye kunyange Pakistan neSri Lanka. Asi zverudzi urwu mikana yebasa haisi nyore kuwana.
Zvizere - Imwe yenzvimbo yakanakisisa yekushandira nzvimbo kune vanobva kunyika
Nha. 3 Gulftalent.com
Nebasa remabasa iri, zvinoshamisa kuti iwe unogona kuvaka rako rezvemhizha. Kuti uise imwe nzira, nokukurumidza yakasika unyanzvi hwehutano ichakubatsira iwe kushandisa GulfTalent CV anovaka. Nechikonzero ichi, shandisa yavo yehunyanzvi yakaumbwa CV uye chimiro kwekuvhima kwako basa chero kupi. Onawo mamwe emuenzaniso CV pane yavo webhusaiti.
Gulf-talente iri Dubai-based recruitment basa site portal. Ichi Dubai company inonyora zvinoshamisa zvemakambani e4,000 anobva kuGulf nyika. Semagumo basa hunters uye kugovera vatungamiri vachishandisa mabasa avo kuwana tarenda itsva. Mune mamwe mazwi, kune mamwe makuru makuru ekubhadhara zvikwata ipapo, kusanganisira Daman, ADCB, uye Etisalat.
ichi Dubai Hiring Company inopa mabasa ekuwana kusvika kune imwe nzvimbo yeGulf region. Kunyange iwe uchawana zvakawanda mikana yebasa muGulf kana uchitsvaga mabasa muAU chete. Uine izvi mupfungwa, kune mashoma mauto ezvezvinzvimbo zviripo aunogona kuwana nekumira kurota nezve Dubai.
MonsterGulf - International career portal muGCC Countries
Iko Monstergulf inotarisira bazi rekambani yekudzidzira nyika. Monster inonyanya kushandiswa-inoshandiswa. Sezvo iwe uri kutsvaga basa, basa riripo vazhinji motokari makambani. Mune mamwe mazwi, monster gulf inobatsira vadzimi vekuvaka nekuvaka uye kubhengi kune zvivakwa. Ndokureva nebasa iri uye peji rewebhu webasa zvinoita kuti uwane kutsvaga basa nekuita, mudunhu kana indasitiri. Iyi saiti yebasa zvakare inobvumidza online basa application itsva expats yekuisa CV kune dhatabhesi uye inopa mazano nezano pa nzira yekushandira mabasa mu Dubai.
Charterhouse - Kuchengetedza nzvimbo yebasa mu Dubai City
Iyi sangano inoshanda mu Middle East, uye zvechokwadi, vanotora mamwe marudzi akasiyana-siyana emaUAE. Nenzira imwecheteyo, kambani iyi inotanga kushanda muUAE kubvira 2004. Charterhouse ine mamiriro evanhu anowanikwa kune expat vanhu vari kutarisa nokuda kwebasa ravo rekutanga kana rechipiri ku Dubai. Kune rimwe divi, mazhinji emigariro yavo ndeyekunyanzvi ane ruzivo pane kuzvijairira nyore nzvimbo. Ivo zvakare nyanzvi mune kwazvo Executive kudzidzisa mabasa eniche niche uye mabasa ouinjiniya.
Michael Page - Basa mu Dubai site muUAE
Panguva imwecheteyo, Michael Company kambani yepasi rese nyanzvi yekutsvaga basa. Sezvineiwo, kambani iyi yakasimba kwazvo mumusika weDubai City. Nekuda kweizvozvo, ivo vane mahofisi pasi rese. Kunyangwe izvi zvingave zvechokwadi Michael peji kusanganisira nyika dzakanakisa nemaguta nechinangwa chekunyora. Zvakaita seJapan pamwe chete neIreland neAustralia. Mukuwedzera, ivo vanogona kukuisa iwe kune mararamiro ematunhu kubva pakupinda basa kune director board board muEmirates Airlines.
Mabasa mu Dubai - Iva akasiyana uye uwane basa idzva!
Uyezve, kana uchida kugara muUAE, ndizvo ndiyo nzira yakanakisisa kune vose vanobva kunyika kutarisisa kwavo kwenzvimbo. Izvo zvinosanganisira masevhisi emari, epakati maneja chikamu mabasa mukutengesa uye kushambadzira mukati Emirates. Pasina kutaura nezvechokwadi chehunyanzvi zvigaro mukutakura, kugadzira uye maindasitiri ekuvaka uye mumahombekombe.
Isu tava kunyoresa makambani eHurumende
Mabasa mu Dubai Kubhadhara kwekutsvaga
Hurumende Makambani muUAE inofanirwa kutarisa
Makambani ehurumende akatanga kuumba makambani akanaka kwazvo mu Abu Dhabi uye Dubai City mumakore gumi apfuura. Uyezve, ivo zvakare kuwedzera kune nyika dzese dzeGCC uye kuita bhizimusi rakawanda ipapo. Mazhinji emabasa akashambadzirwa anobva mumakuru akadai saDoha, Dubai, uye Yangon. Saka ivo vakakura mumabhizimisi emari uye ivo vanokosha zvikuru muUAE. Saka zvakaenzanirana kana uri chiremba expat kuti uite mabasa ehotera kana Executive engineering nyanzvi mumafuta uye gasi. Zvakare, kuvaka, mainjiniya, kubhengi, IT kana ma indasitiri maindasitiri. Unofanira tanga kutsvaga basa ikoko. Aya makambani anoshamisa akakodzera kuedza.
Expo 2020 Career ku Dubai
Expo 2020 muchiedza chekukura UAE. Bhizimusi rekutarisira nekusimudzira muDubai City. Sezvineiwo. iwe unofanirwa kuongorora Middle East webasa musika uye Expo 2020 ndiyo imwe yedzakanakisa nzira dzekuzviita. Kune rumwe rutivi, iwe unogona kuve chikamu che Expo 2020 Dubai rwendo rwebasa rinogona kuonekwa shanduro yakakura yebasa uye mikana yokuzvipira.
Basa iri muEexpo rinowanikwa kune vanhu vakasiyana uye vakachenjera vanotsvaga. Kuzviisa neimwe nzira, kana uri kutsvaga kujoina Expo 2020 HR timu iwe unofanirwa kuve munhu anoshingairira, yakakurudzirwa zvikuru nechinzvimbo chitsva uye kufemera munhu aine timu yako nyowani.
Ushumiri hweMutambo Wemukati
Iko kune 1,000 Ministry of Interior Mabasa mu Dubai nokuda kwako mu2018. Iwe uri muchengeti wemabasa ekupinda? Kana kuti kutsvaga yepamusoro-level executive career ?. Ushumiri hweMukatikati ndeimwe yepamusoro. Pakati pese, ine mishandi yemabasa e1,200 inofanira kuzadzwa mumatare akasiyana-siyana mukati meDaily City. Uye vazhinji vavo vari mubhadharo rakabhadharwa basa basa. Shandisai pano kana uri kutarisa kushanda Hurumende mabasa muUnited Arab Emirates. Isa Yako Resume: Wedzera yako Resume kune ino maindasitiri. Ndokuzo tsvaga zvimwe nezvekupaza nguva yako muDubai City.
Dubai Government Government Human Resource Department kukutsvaka iwe.
Dubai Government yeDare Revanhu Dhipatimendi Rekutarisirwa semutorwa akakodzera Mune ino kesi, chinangwa chemukana uyu rega expats ive munhu akasimba pamhepo muDubai. Mvura inotungamira sarudzo yako yekubatana neyemhuri bhizinesi uye nzira yakanakira yekubatana navo ndeyokuziva zvakakosha zvinangwa kuburikidza neayo Values yakagadzirwa neHurumende yeDubai. Kune vashoma chete vaunofanirwa kuziva "Kuzvidavirira, Kukwikwidzana, Kubatana Kuvandudza, Kujeka, uye Mufaro".
Hurumende inobatanidza mabasa iwe unofanirwa kukunda zvishoma. Somuenzaniso, unofanirwa kuva ne MBA dzidzo yevashandi vezviitiko.
Mabasa kuTECOM Group
TECOM Group inopa rakasiyana mikana yebasa mukati Dubai City, uye iyi kambani inongori chiitiko chakakura. Nechinangwa chekutora vanyowani vatsva kubva kune vanokodzera kusvika kutsva vakapedza kudzidza. Tecom boka vanoshandisa expats uye vemunzvimbo yebasa vanotsvaga nehunyanzvi hwakagadziriswa. Mumiriri anenge aine hunhu uye hunhu anogona nyore kuwana basa navo.
Boka reTecom rinoshandisa dziva rematarenda akawanda kubva kuIndia, US, Canada, Australia uye Middle East. Kuisa imwe nzira, kambani inogonesa vanotsvaga basa kufunga zvakasiyana nezvetsika yeDubai uye masevhisi. Kwemakore ekupedzisira 20 makore, kambani inopa mukwikwidzi zvakakosha kune muvhimi wese wekushanda. Nekutarisisa kwakasimba kumusika uri kukura wepamusika muDubai. Iyo kambani inoita mari inoshanda kwazvo munyika dzeGCC nemakambani anoshamisa uye iwe uchave maneja kana uri munhu chaiye.
Nechikonzero ichi, TECOM Boka mu2018-2019 yakagadzira mari yenguva refu. Kazhinji kutaura, huwandu hwenzvimbo dziripo mukati mekambani hwakagadzirira kuzadzwa. Izvi zvinonyatsozivikanwa Dubai guta rinoshandisa akasiyana mabasa uye expats pamatanho ese eDubai. Kupfupisa iwe unofanirwa kutumira yako yakagadziriswa mitauro vitae kuitira kuti iwe utariswe kuitira kuzarura kweTecom Boka, ndapota Shanyira Dubai Holding Career kuti uise zvinyorwa.
Mabasa mu Dubai Kubhadhara ne Dubai City Company. Ndiyo kambani yakanakisa yevanotsvaka basa !.
Mabasa ku Dubai ne Dubai Holding
Zvapiwa pfungwa idzi, shandisa zvakananga ku Dubai Holding uye uwane "Gov" Job na Dubai Holding. Iwe unofanirwa kutumira Reve yako zvakare paInternet City Holding. Kusvikira panguva ino, zvinodaro best company to work in Gulf Countries. Panguva ino, iwe unogona kunyange kumisa ziviso kubva kukambani yavo. Pakupedzisira, gamuchira chikumbiro chebasa uye mibvunzo kubva kuvashandirwi veDubai. Kusvikira kune vakananga Hurumende vanodzidzisa muDubai. Iwe unogona Kuisa yako kutangazve kune UAE hurumende mapeji.
Kugamuchirwa ku Dubai Holding Group - Dubai Holding Mabasa mu Dubai Kubhadhara ne Dubai City Company.
Iwe unogona ikozvino kushanda kwemabasa ne Dubai Dubai. Vatariri varipo vane ruzivo rwakawanda rwemabasa nehupfumi wekambani dzemakambani akaisa pfungwa pamasangano emabhizimisi, mucherechedzo, kutarisa, dzimba nekutengesa uye kudzidzisa basa rinoenderana nekambani.
Dubai Holding kubvira 2009 yakaita basa rakakura mukutsausa basa uye hupfumi hwebasa kumabasa akawanda maindasitiri. Pamwe chete, iwo makambani anomiririra kupindira mumaindasitiri e12, achienderera achitsigira rutsigiro uye kukura kweyakagadzikana, kuvandudza-kutungamira hupfumi hunoenderana neUnited Arab Emirates Vision ye2021.
Kana iwe uri International candidate uye kutsvaga basa iyo inopa mukana wekushanda pamwe nemitambo yenyika dzakatungamirira, yakazara kudzidziswa nekuvandudza Dubai Holding kushambadzira basa ndewewe. Tanga rako idzva rebasa uye uve chikamu che inokurumidza-kufamba uye inonetsa nharaunda muDubai City. Tumira Resume yako kuDubai Holding.
Tava kunyorera kuDubai!
Chimwezve chinhu chokurangarira ndechekuti Dubai iri kuva nemwero wakanyanya kwazvo mhosva. Saka, uine izvi mupfungwa, Unoda here kuwana a Jobho mu Dubai? kunyange izvi zvingave zvechokwadi tinokwanisa kubatsira kunyangwe uri wechidiki. Iwe kutanga basa idzva muThe Brazil!
Upload Resume Kunokurumidza Kukura Guta Pasi Pano! - Dubai City